जान्नुहोस् ! वर्ड फ्लु भएको कुखुराको मासु खान हुन्छ की हुँदैन् – MediaNP
जान्नुहोस् ! वर्ड फ्लु भएको कुखुराको मासु खान हुन्छ की हुँदैन्
काठमाडौँ । बर्ड फ्लुको कारण अन्य देशहरुमा मानिसको मृत्यु हुने गरेको सुन्ने गरेका थियौ । तर पछिल्लो केही समय अगाडी नेपालमा नै बर्ड फ्लुको संक्रमणबाट एक नेपालीको मृत्यु भएको छ । केही ठाउँमा कुखुराको मासु बेच्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यद्यपी बर्ड फ्लु लागेको कुखुराको मासु खानु हुन्छ हुन्न भन्नेमा मानिसहरु दुविधामा हुने गर्छन् । तर राम्ररी पकाएर खायो भने केही असर गर्दैन् ।
न्यूनतम ७० डिग्री सेल्सिियस तापक्रममा पकाउँदा मासुमा भएका अन्य भाइसरहरु नष्ट हुन्छन् । अर्थात मासु पकाउँदा सबै भागमा राम्रोसँग तापक्रम पुगेको हुनुपर्छ । यसरी पकाएको छ भने मासु खान डराउनु पर्दैन् । सावधानी रुपमा पकाएको मासुहरु खान हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव रहेको छ । अहिले सम्मा बर्ड फ्लु लागेका कुखुराहरु मरेका चराचुरुङ्गी, मरेका जनावरहरु ओसारपसार गर्ने गाडीमा ल्याइएका कुखुराहरुमा बर्ड फ्लुको संक्रमण रहेको पाइएको छ ।
त्यसकाराण् यस्ता बानी व्यवहारमा सुधार ल्याउन सक्यो भने यस्ता किसिमका संक्रमण बाट जोगिने सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगनले जनाएको छ । हरेक चिजको मासु खाँदा ७० डिग्री सेल्सियसमा पकाएर खानु पर्ने बताइएको छ । यद्यपी मासु राम्रोसँग नपकाइ खाएमा घाँटी दुख्ने, पखला लाग्ने जस्ता लक्षणहरु भएमा बर्ड फ्लुको सम्भावना हुने गर्छ । सामान्यतया बर्ड फ्लुको संक्रमण चराचुरुङीमा बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक रुघाजस्तो रोग बर्ड फ्लुको कारण २१ वर्षिय एक युवकको मृत्यु भएको हो । उनी रुघाखोकी लागेको कारण अस्पताल भर्ना भएका थिए । र्यालको नमुनामा नेपालमा पहिलो पटक बर्ड फ्लु भेटिएको हो । बर्ड फ्लुको कारण मानिसको मृत्यु भएको पनि पहिलो पटक नै हो ।
आज अक्षय तृतीयाको दिन चर्चित हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो जन्म दिन मनाउदै , कति बर्ष लागे उनी ?
अम्बा खानुहुन्छ ?यस्ता छन् पात र फल दुवैको ८ फाइदाहरु